(Hadhwanaagnews) Wednesday, August 08, 2018 07:50:00
Guddida Dabagalka iyo Ilaalinta Hantida Qaranku waan xasuusinayaa inay dhammaystiraan wixii qabyo ka ah warbixintooda, ummaddana waxa
Gabayga Murdiso, 9kii Sebtember
Walaw is-aqoon naga dhexeeyo, haddana waxa na dhex maray falka ugu adag ee qof siyaasi ah aannu isku qardoofno. Wacadkayagu waa is-muquunin. Sidaas awgeed, fadlan yaanu jirin qof isku deya in uu ka ergeeyo qoraallada aan ku faaqidayo wixii uu qalloociyay. Isaguna tab iyo xeel kasta wuu dheeli karaa.
Guddida Dabagalka iyo Ilaalinta Hantida Qaranku waan xasuusinayaa inay dhammaystiraan wixii qabyo ka ah warbixintooda, ummaddana waxa aan u soo jeedinayaa in ay guddida ila xasuusiyaan ragga aynu tuhmaynno ee aanay diiraddoodu qaban. Miyaa ay soo wadeen tolow? Ilaahay ha ka abaal-mariyo haddii ay hormadii labaad oodda ka rogayaan, xaalna waan siinayaa haddii aan ka degdegay. Laakiin waxa laga yaabaaba in ay qoraalladan ka helaan raadraac u baahan baadhitaan. Haddii ay wax ka dheefaanna ka fiicanba.
4. Ilhaan Maxamed Jaamac